I-50 SWORD TATTOOS YABANTU-ISANDI ESIBUKHALI SOBUNTSHATSHELI - UHLOBO
I-50 Sword Tattoos yaBantu-Isandi esibukhali seSuave Sophistication
I tattoo zekrele bezikhona okoko ukutyeba koluntu ngenyama enenki kwaqala. Lo mfanekiso mhle uguqula imeko yobudoda, kwaye uphawu lwayo olucaphukisayo luqhubeka kwiinkcubeko zonke ukuhambisa ubuntu obuzimeleyo.
Ukuphucula ubukrelekrele bokuyivelisa, yonke into efunwa ngumntu ozithembileyo ziitotto zamadoda. Ngapha koko, umfanekiso onobuqili wobukrelekrele uya kukubeka ngokuqinisekileyo ukusika ngaphezulu kweentshaba zakho kwisitayile. Akukho nto ifaka amandla obudoda njengokuhonjiswa ngezixhobo ezibukhali.
Kukho iintsingiselo zokomoya ezingenakubalwa ezinxulunyaniswa ne tattoo yekrele. Umzekelo, ubuBuddha bufundisa ukuba i-blade inokuphelisa ngokukhawuleza ukungazi. Kwi-alchemy, isitshetshe simele ukufezekiswa kobunyulu. Le ngcaciso ikwabonakaliswa kubugcisa bobuKristu, obonisa ikrele njengamandla wobulungisa.
Okwangoku, iinkolo zaseAfrika zijonga amakrele njengeempawu zokukhula komntu. Ngokufanayo, intsomi yeCeltic idibanisa izixhobo ezibukhali kwialchemy.
Inkosi yamakhonkco umvambo obalaseleyo
Iigcisa ze-ink zinokuguquguquka okuninzi kunye nohambo olunoyilo lwekrele, ngakumbi kuba zininzi kakhulu umahluko kwitekhnoloji yeblade. Ukusuka kwisikali ukuya kwikitanas, kukho iindlela ezingenakubalwa ezikhoyo. Kananjalo, uyilo olutsha lunokongezwa ngokulula phakathi kweziqwenga ezikhoyo. Ngeempawu zekrele ezidityanisiweyo apha, ubukrelekrele obunamandla buya kuboniswa ecaleni kwesimo sokuyalela.
abantwana babiza iitattoo zamadoda
iiTattoos zesifuba zamadoda emadodeni
Izimbo zeendevu zabafana abamnyama
Ukuthandaza ngesandla kunye nokuwela iitatoo
uhambo oluya kwi tattoo yenyanga
kutheni le tattoo yam iphakanyisiwe
ungaboni bubi ungeva bubi ungathethi tattoo embi